Zakariye Ismaaciil: Alshabaab wadada ayaa ka qaloocatay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Zakariye Ismaaciil Xirsi oo horay u ahaan jiray madaxa sirdoonka Alshabaab, balse kasoo goostay ururkaas sanadkii 2014 ayaa markii ugu horreysay la hadlay weriye ka tirsan BBC, qeybta aarimaha Afrika oo lagu magacaabo, Andrew Harding.
Wariyahan ayaa Zakariye kula kulmay guri aad ay u ilaaliyaan ciidamada nabadsugidda Soomaaliya oo ku yaalla Muqdisho, wuxuuna sheegay wariyahani in Zakariye leeyahay bar Facebook iyo bar Twitter.
(Dhageyso warbixintaan oo aan kasoo qaadannay BBC)
Zakariye oo 33-jir ah ayaa ku biiray Al-Shabaab sanadkii 2007, waxaa uu xusay in ujeedadii horay ugu biiray Al-Shabaab ugu biiray ay aheyd in Soomaaliya la xoreeyo, dalkana dib loo dhiso, hase ahaatee jidkii la marayey uu khaldamay.
“Ujeedadu markii hore waxey aheyd in Soomaaliya la xoreeyo oo dib loo dhiso, hase ahaatee jidkii ayaa khaldamay” ayuu yiri Zakariye Ismaaciil Xirsi.
Zakai wuxuu xusay in hogaankii hore Al-Shabaab uusan wax wada hadal ah la gelin hogaamiyeyaashii kale, isla markaana ay dhacday qaar ka mid ah saaxibadiisa la dilo, kuwana la xiro oo ilaa iyo haatan xabsi ku jira.
Wariye Andrew Harding ayaa Zakariye weydiiyey in sababta uu Shabaab uga soo goostay ay aheyd isagoo waayey dagaalkii xagga awoodd ayaa ku jawaabay
“Ma jirto awood aan lumiyay, marka ka soo tagayay Alshabaab jago sare ayaan hayey, go’aankeyga ayaan qaatay” ayuu yiri Zakriye.
Waxaa sidoo kale la weydiiyey, “Ma oran karnaa Zaki, Alshabaab hore oo haatan noqonaya Xildhibaan?” Zakariye oo qosalaya ayaa yiri “Jagadu muhiim maaha, waxaa muhiim ah inaad dalkaaga badbaadiso”.
Waxaa Zaki la weydiiyey sida uu u arko weerarkii Alshabaab ku qaadeen jaamacadda Gaarisa ee lagu dilay 148 ruux oo u badnaa arday Kenayn ah, wuxuuna yiri “Waan ka naxay, ma aha arrin sax ah in la weeraro arday dhallinyar oo jaamacad dhiganayey, arrintaasi gebi ahaanba wey khaldaneyd”.
Zakariye oo ka mid ahaa dadka saraakiisha Alshabaab ee Mareykanku lacagaha ku raadinayey ayaa laga saaray liiskaas kadib markii uu Alshabaab ka goostay kadibna uu Muqdisho uga dhawaaqay inuu ka laabtay fekerka ururukaas.